Ahoana ny fomba hahazoana Adobe Media Encoder maimaim-poana sy ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Media Encoder Maimaimpoana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-06, Malagasy Blog
Liana amin'ny fitadiavana raha azo atao ny mahazo Adobe Media Encoder maimaim-poana ary misoroka olana amin'ny lalàna? Tsy afaka mividy fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao? Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia horakofako ny fomba azo antoka indrindra hisintonana maimaim-poana ny dikan-teny feno amin'ny Adobe Media Encoder.
Tombontsoa azo avy amin'ny Adobe Media Encoder Free
Ampifandraisina amin'ny vokatra Adobe hafa
Safidy coding maro
Mahay manorina presets
Manohana karazana rakitra marobe
Nahoana aho no mila Adobe Media Encoder?
An'ny Adobe video editing suite ity programa ity. Izy io dia ampiasaina hanodinana rakitra video amin'ny endrika mety, mba hahazoana antoka fa holalaovina amin'ny fitaovana isan-karazany izy ireo amin'izao fotoana izao.
Afaka mandrakizay ve ny Adobe Media Encoder?
Ny programa dia napetraka ao anatin'ny Premiere Pro sy After Effects. Tsy azo atao ny mividy misaraka ity programa ity. Mahazo izany koa ny mpikambana ao amin'ny Creative Cloud Complete Plan.
JEREO ny vidin'ny CC
Misy andrana maimaim-poana ve?
Eny, manome kinova andrana maimaimpoana maharitra 30 andro ny Adobe.
Mifanaraka amin'ny Windows sy Mac ve ny Adobe Media Encoder?
Eny, hiasa amin'ny OS roa ny programa.
Ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fampiasana ny dikan-teny Encoder Adobe Media Pirated
Amin'izao fotoana izao, mpampiasa maro no misintona programa avy amin'ny tranokala piraty. Lazain'izy ireo fa lafo loatra ny vidin'ny dikan-teny nahazoan-dalana raha tsy mila vola na ezaka na vola ny piraty. Saingy amin'ny farany dia mety hiteraka voka-dratsy maro tsy fantatry ny olona izany. Nofaritako eto ambany ny sasany amin'ireo tena matotra.
Raha tratra mampiasa dika tsy ara-dalàna amin'ny Media Encoder maimaim-poana ianao dia miomàna handray andraikitra amin'ny heloka bevava. Ohatra, any Etazonia, ny piraty ara-tsaina dia mety higadra hatramin'ny 5 taona ary lamandy 0,000. Ankoatr'izay, ireo izay manana ny zon'ny mpamorona dia afaka mametraka fitakiana any amin'ny fitsarana ary handoa onitra 0,000 ianao.
Loza amin'ny fiarovana
Ny programa piraty dia feno karazana malware rehetra izay hiditra ao amin'ny solosainao. Ny virosy, ny Trojans ary ny ransomware dia mety hanimba ny PC ary mety ho very mandrakizay ny rakitra manan-danja rehetra. Ankoatra izany, matetika ny piraty dia mampiditra kaody ratsy amin'ny programa voajirika. Mety hangalatra ny angon-drakitra rehetra izy ireo, hifehy ny solosainao ary na dia webcam aza.
Tsy fahampian'ny fanavaozana
Havaozina hatrany ireo programa nahazo alalana mba hahazoana antoka ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra. Na izany aza, raha tompon'ny Media Encoder maimaim-poana piraty ianao, dia tsy ho azonao ny fanavaozana. Aza manandrana manavao ny dikan-teny efa misy, raha tsy izany dia mety ho voasazy ianao noho izany.
Loza amin'ny famokarana
Olana hafa mahazatra an'ireo mampiasa Adobe Encoder piraty dia ny fahatarana matetika sy ny bibikely. Matetika izany dia miteraka fandrosoana very, fotoana lany amin'ny fiezahana hahazo zavatra hiasa ary manimba toe-tsaina. Raha misy olana ara-teknika mipoitra, ny mpampiasa ny dikan-teny nahazoan-dalana dia manatona ny fanohanan'ny mpanjifa. Tsy omena fahafahana toy izany ny mpampiasa dikan-teny piraty. Ho fanampin'izany, mba tsy ho hitan'ny tenanao sy ny PC-nao, dia tsy ho afaka hanararaotra ireo endri-javatra an-tserasera sasany amin'ny programa ianao.
Manatona tolotra fanovana video matihanina hahazoana fanampiana haingana amin'ny fanovana video.
Raha manontany tena ianao hoe ahoana no ahazoana Adobe Media Encoder maimaim-poana, ny iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra dia ny manandrana ny hafa. Nifidy telo amin'ireo safidy tsara indrindra aho izay afaka manolo tanteraka ny Adobe Encoder ary maimaim-poana tanteraka.
MAMPIASÀ HANDBRAKE MAIMAIMPOANA
Fanohanana endrika mahavariana
Ny fisian'ny fanodinana batch sy preset
Fametrahana endri-javatra midadasika
Sarotra ny mahafehy
HandBrake dia mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny mpampiasa vaovao, fa hiatrika amim-pahombiazana ny horonan-tsary nafaran'ny mpampiasa. Ity safidy Adobe Media Encoder ity dia manome safidy malalaka amin'ny endrika video amin'ny haben'ny rakitra irina sy ny kalitao.
Mba hahazoana vokatra haingana amin'ny fiovam-po amin'ny endrika isan-karazany, dia azo atao ny mampihatra preset avy amin'ny tontonana sisiny, miaraka amin'ireo fanitsiana ilaina rehetra. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia afaka mamakivaky tabilao marobe ao amin'ny fizarana Output Setting, manitsy ny mari-pamantarana encoding marina, manampy vokatra sy ny sisa.
Ampidiro ny safidy video
Manohana endrika video miely patrana ho an'ny fanondranana
Hazavao ny UI
Fahaizana encoding miavaka
Avidemux dia programa maimaim-poana hamadika horonan-tsary. Miavaka amin'ny fanohanan'ny endrika horonan-tsary miely patrana sy ny fahafahana manivana sy manapaka horonan-tsary ho fizarana alohan'ny fiovam-po. Raha vao manokatra Avidemux ianao, dia mety hampifangaro anao amin'ny endri-javatra misy azy, indrindra raha tsy mahazatra ny programa toy izany ianao. Izany dia satria izy io dia ampiasaina amin'ny tanjona fanovana video ihany koa. Saingy, rehefa afaka kelikely, dia ho afaka hamantatra ny dingana manontolo ianao - ampidiro fotsiny ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny menio File ary alao ny endrika tianao.
Ity safidy Media Encoder maimaim-poana ity dia manaiky ny endrika rakitra toy ny MPG, MP4, AVI, FLV sy ny maro hafa.
fampakaram-bady fanovana video ho fanampiana haingana amin'ny vanim-potoana ambony.
MAMPIASÀ FORMAT FACTORY MAIMAIMPOANA
Manova haingana ny rakitra ao anaty andiany
Fitaovana fametahana kapila ho an'ny CD, DVD ary Blu-ray
Fanohanana endrika rakitra maro
Fanavaozana sy fikojakojana tsy tapaka
Miorina amin'ny Windows ihany
FormatFactory dia programa miavaka hamadihana rakitra ho endrika isan-karazany. Tena hanampy anao izany raha te hanatsotra ny fizotran'ny fizarana ianao, aza mibodo ny habaka solosaina amin'ny rakitra mavesatra na manao ny rakitra mifanaraka amin'ny mpilalao media sasany. Ity safidy malalaka Adobe Media Encoder ity dia miavaka amin'ny interface tsotra izay miantoka ny fizotry ny fiovam-po mora ho an'ny mpampiasa rehetra, tsy misy dikany ny haavon'ny traikefa.
Rehefa manova horonan-tsary dia tsindrio ny bokotra "Safidy". Hisy tonian-dahatsary kely hiseho hanampy anao hisafidy teboka fanombohana sy fiafarana na hanapaka ilay horonan-tsary. Ankoatra izany, ny fandaharana dia somary manerana izao rehetra izao noho ny fanohanana ny sary sy ny raki-peo.
Jereo ny tsara indrindra maimaim-poana lahatsary converters.
Ny fanasokajiana loko dia iray amin'ireo dingana sarotra indrindra amin'ny fizotry ny fanitsiana horonan-tsary. Saingy misy fitaovana mahagaga hanampy anao amin'ny fanatanterahana ity dingana ity ao anatin'ny minitra - LUT. Ity misy fifantenana amin'ireo LUT maimaim-poana tsara indrindra izay tokony ananan'ny mpamoaka horonantsary matihanina rehetra eo am-pelatanany.
Misintona LUT maimaim-poana
Ampidino maimaim-poana ny Adobe Media Encoder
Kitiho ny rohy "Adobe Media encoder free download" ary ampiasao ny fahafahanao hitsapa ny programa mandritra ny 30 andro. Araraoty ireo safidy premium rehetra, ary koa ireo fanavaozana sy fiasa navoaka vao haingana.
Tombontsoa Adobe Media Encoder